नेपालभन्दा बेलायत चिटिक्क परेको रै'छ - GurkhaMediaनेपालभन्दा बेलायत चिटिक्क परेको रै'छ - GurkhaMedia
नेपालभन्दा बेलायत चिटिक्क परेको रै’छ
पछिल्ला पुस्ताकी चर्चित गायिका पवित्र गुरुङ तमुधिं यूकेको निमन्त्रणामा गत २४ डिसेम्बर २०२१ मा बेलायत आएकी छन् । तमु ल्होछार २०७८ कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुतिका लागि यहाँ आएकी गुरुङले बेलायतका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम गरिरहेकी छन् । नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिकास्थित गोल्फुभञ्ज्याङको गुरुङगाउँमा जन्मिएकी गायिका गुरुङ अचेल काठमाडौं चाबहिलमा बस्छिन् । छोटो समयमै स्रोता, दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल उनै गायिका पवित्र गुरुङसँग बेलायत भ्रमण र सांगीतिक यात्राबारे गोर्खा मिडियाका लागि मिलन तमूले गरेको कुराकानी :
तपाईं तमु ल्होसार सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि बेलायत आउनुभयो, नेपाल र विदेशका कार्यक्रममा के भिन्नता पाउनुभयो त ?
एकदमै भिन्नता पाएँ । अहिलेसम्म नेपालमा मैले यत्ति ठूलो स्टेजमा पर्फमेन्स गरेको थिइनँ । यूके आएपछि यसरी पर्फम गर्न पाएँ । यो मेरो लागि ठूलो प्लेटफम हो । सांगीतिक माहोल त यहाँ अझै राम्रो जस्तो लाग्यो ।
विदेशमा बसेर पनि नेपालीले आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गरेको देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
एकदमै खुसी लाग्यो । नेपाल बस्नेहरुले पनि यत्तिको गर्नुहुन्न होला । तर, पनि उहाँहरु विदेशमा हुँदा पनि आफ्नो संस्कार, संस्कृति जोगाउनको लागि आफ्नो चाडपर्वहरु मनाउन छाडनुभएको छैन, यो देख्दा खुसी लाग्यो ।
ल्होसार मनाउने तरिका नेपाल र विदेशमा कत्तिको अन्तर पाउनुभयो ?
यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ समुदायभित्रकै संस्कार भएकोले त्यत्ति धेरै भिन्नता पाइनँ ।
कुन संस्थाको निमन्त्रणामा यहाँ आउनुभयो ?
म तमुधिं यूकेको निमन्त्रणमा यहाँ आएको हुँ । म यहाँ आउन पाउनुमा अध्यक्ष हित काजी गुरुङ, उपाध्यक्ष जुमकाजी गुरुङलगायतको ठूलो देन छ । उहाँहरु र तमधिं यूके परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
बेलायतमा आउनुभएपछि कहाँ-कहाँ कार्यक्रम गर्न जानुभयो ?
पहिलो कार्यक्रम तमुधिं यूकेकै भयो, जुन २६ डिसेम्बर साँझ अल्डरसटको एम्पायर हलमा । एकदमै रमाइलो भयो । यसपाली कोरोना भाइरसको डरले मानिसहरुको चापचाहिँ कम नै थियो । २७ डिसेम्बरमा साउथ इस्ट रिजनल तमु धिं यूके लन्डनमा र २ जनवरीमा धादिङ-नुवाकोट समाज यूकेद्वारा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएँ । उहाँहरु सबैमा हृदयदेखिनै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल र बेलायतको मौसममा कुन अनुकूल लाग्यो तपाईंलाई ?
नेपालमा चाहिँ म अहिले काठमाडौंमा बस्छु । त्यहाँको मौसम भनेको नौलो खाले पनि हुन्न जेहोस् ठिक्क खालको । यहाँ अलि चिसो छ । नेपालको सडक व्यवस्थापन र यहाँको व्यवस्थापनमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ । नेपालमा भन्दा यहाँ चिटिक्क परेको रै छ । हाम्रो नेपाल पनि राम्रो त छ तर पनि वातावरण व्यवस्थापन यहाँ धेरै फरक छ ।
यसअघि तपाईं नेपालभन्दा बाहिर देशमा कार्यक्रम गर्न जानु भएको थियो ?
यो मेरो पहिलो पटक हो । म आफूलाई एकदमै लक्की मानेको छु । एकदमै खुसी छु ।
तपाईंले सांगीतिक यात्राको सुरुवात कहिलेदेखि गर्नुभयो ?
२०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो । त्यो वर्षदेखि एसईई सुरु भयो । मैले एसईई पनि दिएँ अनि कलेज सुरु गरेँ । सँगै म्यूजिक कक्षा नि सुरु गरेँ २०७३ बाट भनौं न । संगीत कक्षा खोज्ने र लगाइदिनुहुने मेरी दिदी गरिमा गुरुङ हुनुहुन्छ । मेरो म्युजिकल जर्नीमा दिदीको अपार साथ रहेको छ । गाउन त सानै उमेरदेखि एकदमै धेरै गीत गाउँथें । तर यसरी म सिक्छु नै भनेर लागेको चाहिँ २०७३ बाट हो ।
२०७३ सालदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा लागिरहनुभएको छ, अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो ?
नेपाली र गुरुङ भाषाका गीतहरु बराबरजस्तै छन् । सबै जोडदा २०/२२ वटा भयो होला ।
तपाईंले कुन कुन कलाकारसँग गीत गाउनुभयो अहिलेसम्म ?
आदरणीय दाइ तिलक गुरुङलाई म सम्झन चाहन्छु किनभने उहाँले नै गर्दा गीत गाउने बाटो खुलेको हो । दाइसँग मैले ‘ओहो ङल माया खए खब क्योल माया छली तोब पिदो ङलाइ क्योला साथ क्योल माया’ भन्ने पहिलो गुरुङ गीत रेकर्ड गर्न पाएको थिएँ । आदरणीय आरके गुरुङ दाइसँग पहिलो कौडा गीत गाएको थिएँ । दाइको घरचाहिँ गोरखा रैछ, ‘गोरखा सुलीकोट’ भन्ने गीत गाएँ ।
तपाईं भावी योजना के छ ?
मेरो जीवन संगीतमै बिताउने सोचमा छु ।
गीत, संगीतको तालिम लिनुभएको छ ?
अहिले गन्धर्व संगीत विद्यालयका आदरणीय गुरु चन्दनकुमार श्रेष्ठसँग गीत सिक्दै छु । अहिले म चौथो वर्षमा अध्ययन गर्दैछु ।
नयाँ गीत पनि आउनेक्रममा छ कि ?
धेरै गीतहरु पेन्डिङ भएर बसेको छ । यूके आउनुभन्दा अघिल्लो राति हतारहतार एउटा गुरुङ गीत रेकर्ड गरेको थिएँ । त्यो गीत पनि छिट्टै आउँदैछ । धेरै गीतहरु रिलीज हुँदैछ ।
तपाईं नेपाल आईडलमा पनि सहभागी हुनुभयो, अनुभव सुनाइदिनु न ?
नेपाल आईडल सिजन ४ एकदमै राम्रो प्लेटफम हो म्युजिसियनहरुका लागि । र, त्यसमा म पनि सहभागी छु र मैले नेपाल आईडलको अडिसन दिएको थिएँ, त्यसमा सेलेक्टेड भएको छु ।
विशेषगरी मेरो आदरणीय दाइ गणेश गुरुङलाई सम्झिन चाहन्छु । दाइले एक जना कलाकारको नाताले अथवा बहिनीको नाताले मेरो हरेक पाइलामा एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ । उहाँलाई म नमन गर्न चाहन्छु । अर्को आदरणीय प्रितम गुरुङ दाइ हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु । मेरो म्युजिकल जर्नीमा एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ दाइले । अनि दुर्गा गुरुङ दाइ हुनुहुन्छ । बाबा गीतका रचनाकार माइजु मिना गुरुङ र मामा राम गुरुङ । उहाँहरु सबैलाई सम्झिन चाहन्छु । यहाँहरुको सहयोग बिना पवित्र अधुरो छ । पवित्र एक्लैले केही गर्न सक्दैन । त्यस्तै यत्ति धेरै व्यस्तताका बाबजुद मलाई कुरा गर्ने अवसर दिनुहुने गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमु दाइ । त्यस्तै मैले सम्झिनुपर्ने आदरणीय प्रेम गुरुङ, तिलक गुरुङ दाइ । उहाँले गर्दा नै मेरो गुरुङ गीतको बाटो खुल्यो । उहाँको गीतबाट मैले सुरुआत गरेँ । तेजेन्द्र गुरुङ, मनोज गुरुङ, आरके गुरुङ दाइ हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ । बेलायत आइसकेपछि छुटाउनै नहुने नाम हो, राम गुरुङ दाइ, मिरा गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ । राम दाइ, मिरा दिदीले माया दिएर बेलायतमा बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ । उहाँहरुप्रति धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । फेरि एकपटक हाम्रो तमुधिं यूकेका अध्यक्ष हित काजी गुरुङ, उपाध्यक्ष जुमकाजी गुरुङसहित सम्पूर्ण कार्यसमिति र आमा समूहप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।